Oongxowankulu nemibutho yabo babanga ukuba kukho iingxaki zoqoqosho kwihlabathi yaye basebenzisa oku ukunika isizathu sokugxotha abasebenzi emisebenzini, sokunciphisa inkcitho kwintlalo yaye kwiphulo lokuhlasela nokujongela phantsi iinzuzo ezaphumelelwa kwikhulu leminyaka yemizabalazo. Kodwa luhlobo luni lwengxaki yaye ngubani ongunobangela wazo? Okubaluleke ngaphezulu yintoni enokwenziwa ngezingxaki?
I-Workers International Vanguard League (WIVL) ikhutshelwe ngaphandle kulo nyulo lukaApril
Elinye lamalungelo ebekudala sililwela, ibililungelo lokulungiselela, lokwakha intlangano zopolitiko nokuthatha inxaxheba kulonyulo. Kwa elilungelo liphantsi koxin zelelo. Yonke imibutho epalamente ihleli phantsi ngokunokwayo yaye yabeka idipozithi yokuthabatha inxaxheba kumaphondo onke yaye nakumgangatho kazwe lonke eyi R540 000. U-WIVL uzingenisile zonke izinto ezifunekayo, ukuquka uluhlu labagqatswa abangamashumi amabini anesithoba (29) abavela kumaphondo amahlanu, abasuka kwiingingqi zasezilalini nasezidolophini. Kuphela iKomishoni yoLonyulo (IEC) ebinomdla kuyo kukuba sinayo na idipozithi. I-IEC, emiswe ngurhulumente wembumba kawonkewonke weANC, isebenze egameni longxowankulu abadla bodwa ukukhuphela ngaphandle intlangano zabasebenzi ezinjengathi. Amazwe amaninzi obungxowankulu afuna nje uluhlu lweesignitsha ukubonisa inkxaso ethile, ukuze uthabathe inxaxheba kulo nyulo. Elo gatya lilula liyalelwa kubasebenzi apha.
Indlela kuphela eya phambili kubasebenzi kukuba balungiselelwe ngokuzimela kongxowankulu nakwipalamente; mele sakhe iikomiti zokhuselo zabasebenzi sizikhusele kuhlaselo oluqhubekayo longxowankulu nakwi agents zabo. Ngoku, ngaphezulu kunakuqala, kufuneka sakhe intlangano ezimeleyo yotshintsho olululo. Simema abalwi abangabasebenzi namaqabane azibandakanye nathi kumlo ochasene nenkqubo yehlabathi yongxowankulu-yama impiriyali.
Kutheni sithabatha inxaxheba kolu lonyulo?
Abantu abaninzi basibuzile kutheni sithabatha inxaxheba kulo nyulo xa sikholelwa ukuba iSocialism ayizukuza ngepalamente. Sithabatha inxaxheba kolu lonyulo ngoba abantu abaninzi banombono wento engekhoyo wokuba ipalamente ingenza impucuko ebomini babo. Injongo zethu eziyintloko zokuthabatha inxaxheba kukujongana nabameli bemibutho yongxowankulu ngqo. Siyakuphakamisa izindululo namabango abasebenzi. Iimpendulo kanye zabameli bemibutho yongxowankulu ziyakusinceda sibonakalise kwisininzi sabasebenzi yintoni indima yepalamente ngokwenyani. Indima yepalamente kukunika inyambalala umbono wento engekhoyo wokuba sinelizwi lokwenyani ekulawuleni ilizwe, xa ngokwenyani, silawulwa ngolawulo lozwilakhe lomgangatho wongxowankulu.
Kungokuba imibutho yongxowankulu iqondile ukuba bazakubhentsiswa sithi, yilo nto bezakuzama nangaziphina iindlela bagcine abameli bethu ngaphandle epalamente.
Sinemiqathango engqongqo kubameli bethu ukuqinisekisa ukuba babhekisa phambili umzabalazo wabasebenzi yaye abathinjwa. Abameli bethu bazakusayina isibhambathiso ngenx’ engaphambili sokuba bazakuba phantsi kokuthotywa kamsinya, bazakwamkela umvuzo omisiweyo womsebenzi onobuchule; bazakubasezikhundleni inyanga ezintandathu kuphela (abameli bazakujikeleza); bazakubeka umzabalazo wabasebenzi ongaphandle epalamente ngaphezulu kwawo nawuphina umsebenzi wepalamente.
Ngoko ke yintoni intsusa yento ebizwa iingxaki zabaqashi?
Inzame zabo zokunyusa iingeniso zifikelele kwisithintelo esikhulu. Iingeniso zabo ziqalise ngokwehla ngamandla angaphezulu ngoba bengasakwazi ukucudisa iingeniso ezaneleyo kubasebenzi behlabathi. Oku kukhokelele ongxowankulu ukuba baphambukise imali yabo ekuyizaliseni kwimveliso kodwa kwintelekelelo (speculation) yezindlu, ukutya, izabelo, kwinto evela kwenye, njalo njalo. Kukugqabhuka kweli qampu lentelekelelo elithe labanga ezingxaki zangoku, ezo kodwa iliphawu lokwehla kweengeniso kumacandelo emveliso. Iphulo labo lokunyusa iingeniso libetheke kwisithintelo esikhulu. Kwiminyaka edlulileyo, bebenciphisa abasebenzi ukwenyusa izinga leengeniso zabo kangangokuba bafikelele kwisiphambuka sokuba kukho abathengi abambalwa kakhulu (bambalwa kakhulu abaqeshiweyo bathenge impahla zorhwebo) ngoko izinga leengeniso liqalise ngokuhla. Ongxowankulu sele bekuqhelile ukwenza inkitha yeengeniso ukuthi ukuhla okuncinane kubo ‘ziingxaki’. Iivenkile ezinkulu (shoprite, pick n pay, spar, etc) zigcwele kukutya, abathengisi zimoto bazithenge ngokugqithisileyo iimoto, kodwa kukho abathengi abambalwa kakhulu bokuzithenga kumgangatho wamaxabiso aphezulu. Ngolo hlobo ingxaki ayikukuba kukho izinto ezinqongopheleyo, kodwa zigqithisile! Ubungxowankulu buthetha, ubutyebi behlabathi besezandleni zongxowankulu abam balwa, ekubeni abasebenzi behlabathi begciwa bebulawa ngendlala.
Ama impiriyali Ongxowankulu abadla-bodwa baqhubeka ngokwenza iingeniso ezinkulu
Kunyaka ophelileyo,urhulumente woMzantsi Afrika uqokelele ikhulu elinamashumi amathandathu ananye lamawaka ezigidi zerandi (R161Billion) kwirhafu yenkampani kwingeniso. Oku bekuzipesenti ezingamashumi amabini anesibhozo (28%), okuthethe ukuba iinkampani zenze iingeniso ezingamakhulu amahlanu anamashumi asibhozo amawaka ezigidi zerandi (R580 Billion) kunyaka ophelileyo. Ukuba siyacinga ezi kuphela ziingeniso ezibhengeziweyo ngoko kukhuselekile ukucinga ukuba iingeniso zenkampani zokwenyani bezisondele ubuncinane kumakhulu asixhenxe amawaka ezigidi zerandi (R700 Billion). Ngoko ngokucacileyo, akukho zingxaki zeengeniso eMzantsi Afrika. Izinga lengeniso kumazwe ebesakucinezelwa njengoMzantsi Afrika, belisoloko liphezulu ngaphaya kunakumbindi wama impiriyali. Ngoku ama impiriyali abanga kwa iingeniso ezinkulukazi kumazwe ebesakubangabacinezelwa ukubuyisela iingeniso zabo ezehlayo ekhaya.
Xa abaqashi abakhulu bethetha ngeengxaki yaye xa abasebenzi bethetha ngeengxaki, sithetha ngezinto ezahlukeneyo. Xa abaqashi bethetha ngeengxaki bathetha ukuthi endaweni yokwenza iingeniso ezingamawaka amathathu epesenti (3000%) umgangatho weengeniso zabo uhlele kumawaka amabini anamakhulu amahlanu epesenti (2500%). Xa abasebenzi bethetha ngeengxaki, sithetha iqondo eliphezulu lokungabinamsebenzi, lababulawa yindlala kunye nokufa phambi kwexesha kwezigidi zabasebenzi.
Iingeniso ezingaphaya kokuqonda zivela kwimpahla zorhwebo ezithengiswa ngaphezulu lee kunexabiso lazo lokwenyani lokuzivelisa
Ixabiso lokwenyani lengxowa ye cornflakes ngamashumi amathathu esenti (30 cents). Kodwa ingaba abavelisi abakhulu bokutya okanye ivenkile ezinkulu zinganciphisa amaxabiso ukwenzela izigidi ezifa yindlala zitye? Hayi, ngoba kuthetha ukuthi izinga leengeniso zabo elizipesenti ezingamawaka amahlanu anamakhulu asixhenxe (5700%) lizakuhla libe zipesenti ezilikhulu 100% okanye amakhulu amabini 200%- oku abakulungele ukukwenza.
Akudalanga kakhulu ixabiso le Plutinum belingamakhulu amane anamashumi amane edollar ($440) yathi intelekelelo yanyusela amaxabiso phezulu ngaphezulu kwamawaka amabini edollar ($2000). Ngoku nje sele ihlile yaba liwaka ledollar ($1000), uAnglo Platinum ufuna ukugxotha emisebenzini ishumi lamawaka (10 000) abasebenzi, kodwa bebekholisekile kwaleli nani linye labasebenzi xa ixabiso lalizidollar ezingamakhulu amane anamashumi amane ($440). Sele beqhele umgangatho ophezulu weengeniso yaye abakulungelanga ukuwuncama.
Ngaphezu kwamashumi amane epesenti (40%) epetroli esetyenziswa eMzantsi Afrika iveliswa apha nguSasol ngaphantsi kunamashumi amabini edollar ($20) umphanda. Xa le nkampani yayinduluka, abasebenzi, ngeerhafu zethu sabaxhasa kodwa ngoku benza inkitha yeengeniso bayaqhubeka ngokuncediswa ngokwenza ngurhulumente weANC, ukugcina amaxabiso epetroli ephezulu ngokwenziwa. Abanini bezabelo abazintloko namhlanje kuSasol yimizi egcina imali yaseMelika enjenge Bank of New York, JP Morgan Chase, SSB, State Street.
Kutheni i-ANC inganyanzelisi irhafu ephezulu kuma impiriyali adla wodwa?
Ukunyusa irhafu yenkampani kunokwenzeka
Ngeemini ‘zobandlululo’ izinga lerhafu yenkampani lalingamashumi amane anesibhozo epesenti (48%). Urhulumente womfela ndawonye weANC uyinciphisile irhafu yenkampani yabangamashumi amabini anesibhozo epesenti (28%). Njengenyathelo phakathi kwinkqubo yobungxowankulu, urhulumente unako lula ukunyusa izinga lerhafu yenkampani ukuya kumashumi amahlanu epesenti (50%). Oku bekuzakuqokelelela amakhulu amabini amawaka ezigidi zerandi (R200 billion) ngaphezulu ngonyaka kwindleko zokuhlala yaye inkampani bezizakube zisenza iingeniso ezingamakhulu amathathu anamashumi amahlanu amawaka ezigidi zerandi (R350 billion) ngonyaka. Kumazwe ahlukeneyo aseYurophu izinga lerhafu yenkampani ngamashumi amane anesibhozo epesenti (48%). Izinga lerhafu yenkampani eMelika ngamashumi amathathu anesihlanu epesenti (35%). Ngoko ke kutheni urhulumente weANC engayinyusi irhafu yenkampani? Isizathu sokuba inkampani zizakuphakama yaye zibaleke ayisosiqinisekiso njengokuba zihlawula irhafu eninzi ngaphezulu kwezinye indawo ehlabathini. Inyani yeyokuba urhulumente weANC, ngenkxaso ngokwenza yenkokheli zikaCosatu nezeSACP, okubaluleke ngamandla zixhasa ongxowankulu. Xa ubungxowankulu busezingxakini, inginginya yabantu iphakama, njengokuba babenjalo apha ngo 1985-1994, ongxowankulu ngamanye amaxesha balawula ngembumba zikawonke-wonke (Popular Front). Le mbumba ngumfela ndawonye wemigangatho emininzi, leyo ngokubanzi inenkxaso yenkokheli zemanyano zabasebenzi, ezo zibophelela impembelelo yabasebenzi ukuba ixhase inkqubo yobungxowankulu. Okuyintloko inkokheli zeANC-Cosatu-SACP zembumba zizimisa ngathi zixhasa abasebenzi, kodwa zitshintsha ukhondo lwemizabalazo yenkitha yabasebenzi zibase kwindlela evalekileyo ngaphambili, kude le kumzabalazo wokuthabatha ulawulo, ukuthi kude le kumzabalazo weSocialism.
Iimbumba zikawonke-wonke (Popular Fronts) zinembali yokungcatsha abasebenzi
Iimbumba zeMDC eZimbabwe, zeMAS eBolivia kunye nePSUV eVenezuela yimizekelo efanayo apho imizabalazo yabasebenzi iphambukiswayo kude lee kumzabalazo wolawulo. Kutsha nje abasebenzi migodini baseHuanuni eBolivia baphakama bebanga ukuba iminyaka yokuzalwa yepenshini ithotywe ibe ngamashumi amahlanu anesihlanu (55). Umkhosi kaMorales (inkokheli ekucingwa yeyasekunxele) wabizelwa abasebenzi uzokubatyumza. Abasebenzi mgodini ababini babulawa yaye inkokheli zemanyano (Federation) lwemanyano zabasebenzi zahlala zisonge izandla ekubeni abasebenzi babecinezelwa. Ababasebenzi mgodini bathatha isigqibo babethi’ ikhwelo lokutshintsa inkokheli zabo zemanyano yabasebenzi ezingabathengisi. Kwelinye icala xa amaqela alawula ngokozwi-lakhe ahlasela ngomkhosi axhaswa ngama impiriyali aseMelika athabatha phantse isiqingatho sonke selizwe, uMorales zange enze nto ukubamisa, amakhulu-khulu abasebenzi nabalimi belizwe balahleka, abanye babulawa. Abasebenzi bagcinwa behluthwe izixhobo ekubeni amaqela ozwi lakhe ahlasela ngomkhosi asebenza ngokukhululekileyo. Abanjalo amanyathelo achasene nabasebenzi athatyathwa yimbumba kawonke-wonke eBolivia, leyo abasebenzi behlabathi kufuneke bethathe isifundo ngamandla kuyo.
Ucalulo olufutshane lohlahlo lwabiwo-mali lakutsha nje
Yonke imibutho esepalamente, ngaphandle kokukhetha, ngokubanzi ilwamkele uhlahlo lwabiwo-mali. Inkokheli zikaCosatu zibenamazwi afudumeleyo okudumisa uhlahlo lwabiwo-mali. Inkokheli zikaCosatu neSACP zinika isizathu sokuxhasa i-ANC ngoba sinorhulumente ‘osakhulayo’. Iinkokheli zikaCosatu neSACP zikholelwa ekubeni kumele sigqithe kwixesha ‘lolawulo lwentando yesininzi longxowankulu’ ukuze sakhe iimeko zeSocialism. Eli likhusi lomsi lokufihla injongo eziyinyani zembumba yomfela ndawonye weANC-SACP-Cosatu, ukuba abathile abamnyama abakumgangatho ophakathi babe ngabalingane bama impiriyali abanganeno, ngokuncama amabango abasebenzi. Make siphonononge iindawo ezim balwa:
Kuthelekelelwa ukuba izindlu ezingekakhiwa ngoku sisigidi esinesiqingatha (1.5 million) zezindlu. Ngenxa yokukhula kwenani labemi inani lezindlu ezifunekayo ngonyaka nje ukugcina isantya soku ngamakhulu amabini amawaka (200 000). Makhe sithathe njengenyaniso ukuba ikhaya elifanelekileyo zizikwemitha ezingamashumi asithoba (90 square metres). Indlu nganye iyaku dla amakhulu amabini anamashumi asixhenxe amawaka erandi (R270 000), ke ngoqingqo mali lweshumi elinesithoba nesiqingatha samawaka ezigidi zerandi (R19,6 Billion) kuphela ngamashumi asixhenxe anesithathu amawaka (73 000) ezindlu ezinokwakhiwa. Oku akwanelanga kwa ukumelana nokwanda kwenani labemi. Oku kuthetha ukuthi izigidi ezisixhenxe nesiqingatha (7.5 million) zabantu abangenazindlu ngoku bazakuhlala lonke ixesha bengenazindlu yaye inani labantu abangenazindlu lizakunyuka nyaka nonyaka ngamakhulu amathandathu amawaka (600 000). Nokuba izindlu zeRDP ezincinane zakhiwe ziyakwenza ikhulu elinamashumi amathandathu anesithathu amawaka kuphela (163 000), zisengaphantsi kunokukhula kwenani labemi; inani labangenazindlu lisezakukhula ngekhulu elinamashumi asibhozo amawaka (180 000) nyaka nonyaka. Ukutshabalalisa ngokugqibeleleyo umsebenzi ongekenziwa ezindlwini kufuneka amakhulu amane amawaka ezigidi zerandi (R400 Billion) [kumaxabiso anamhlanje ezindlu aphezulu ngaphaya]. Xa urhulumente ethetha ngamakhulu asixhenxe amawaka ezigidi zerandi (R700 Billion) kumaziko akhoyo (for infrastructure), ngokucacileyo abanazindlu ezingqondweni.
Isininzi samakhulu asixhenxe amawaka ezigidi zerandi (R700 Billion) azakusetyenziselwa kubuxoki bukaEskom (obo sibhalileyo ngabo ngokubanzi – jonga i-website yethu).Ngokufutshane, icebo likarhulumente lokuphinda kabini amandla okudala umbane ngaphakathi kweminyaka engamashumi amabini. ‘Ukhulo’ kwezoqoqosho luvele kwimisebenzi kawonke wonke, kwinkonzo zezimali nakwezokhenketho. Ngamaziko ombane amangaphi afunekayo ukunika amandla uncumo lomkhokeli wabakhenkethi? Iinkampani ezizakuxhamla ngabanini bezabelo bakwa General Electric noMurray and Roberts (nabanini bezabelo abazintloko abanjenge Bank of New York, State Street, JP Morgan Chase, SSB, njalo njalo).
Isininzi sentsilelo yoqingqo-mali samashumi asithoba samawaka ezigidi zerandi (R90 Billion) ayisesolwakhiwo lwezindlu okanye naziphi imfuno zokuhlala, kodwa yeyokwakha amaziko amandla ombane angafunekiyo, kwa nalushishino longxowankulu. Urhulumente weANC ukulungele ukuboleka kuma impiriyali ahlawule umsebenzi wama impiriyali kodwa akakulungelanga ukuhamba kangangalomgama mnye abeke izigidi zabantu abahlala ematyotyombeni ezindlini ezifanelekileyo. Ukuzibophelela kwabo okuxeliweyo bokubhangisa indawo ezinezindlu ezimdaka ezidolophini bubuxoki, bungqinelwa ngamanani wabo ohlahlo lwabiwo-mali.
Ngo September 2008, inani lemisebenzi esisigxina labekwa kwizigidi ezisibhozo nesiqingatha (8,4 million). Eli nani lehlile kwisithuba seminyaka elishumi edlulileyo ukusuka ngaphezu kwezigidi ezilithoba (9 million). Oku kuthetha ukuthi ukunyuka kwamathuba emisebenzi okuxelwayo kwemisebenzi ezizigidi ezibini (2 million yemisebenzi) kususela ngo 2002 ibingeyomisebenzi esisigxina yaye okuyinyani ibigcinwe ikakhulu kwimisebenzi yoluntu. Le ‘misebenzi’ sele ithe shwaka. Kususela ngo1994 isiqingatha senani lamashumi amahlanu amawaka (50 000) efama zoshishino zatshatyalaliswa yaye ngaphezu kwesigidi nesiqingatha (1,5 million) sabasebenzi basezifama balahlekelwa yimisebenzi yabo. Nyaka nonyaka kukho amakhulu amahlanu amawaka (500 000) abaphuma ezikolweni. Ngolo hlobo inani labangenamsebenzi landa ubuncinane ngamakhulu amabini amawaka (200 000) nyaka nonyaka. Kodwa urhulumente ucwangcise kuphela ukudala amakhulu amane amawaka (400 000) emisebenzi ‘yemini yonke-elinganayo’ ngeenkqubo zemisebenzi yoluntu kule minyaka mithathu izayo. Endaweni yokuqasha amakhulu amane amawaka (400 000) abasebenzi bakamasipala abatsha abanoncedo, urhulumente ukhetha ukuthengisa inkonzo zikamasipala kubantu babucala ngabangxungxi kwimisebenzi yoluntu. Inkokheli zikaCosatu zixhasa ngokupheleleyo ukwenziwa abangxungxi icandelo labasebenzi bakarhulumente. Urhulumente ukucacisa ngokokutsha okuxelwa ngongaphangeliyo ekhuphela ngaphandle izigidi esele zincamile ukukhangela imisebenzi kunye nezigidi ezifa yindlala ematyotyombeni. Kunyaka ophelileyo bade bacacisa ngokokutsha okuxelwa ‘ngabatyhafisiweyo’ ekhuphela ngaphandle esinye isigidi sabasebenzi ezincwadini zabo yaye bebabeka kudidi ngokubanzi ‘lwabangenagalelo kwezoqoqosho’. Urhulumente ubanga ukuba ukungabinamisebenzi kwehlile xa ngokwenyani kungenyukanga nje kuphela kodwa kuyakusoloko kuqhubeka ngokwenyuka phantsi kwecebo likarhulumente langoku.
Enye irhafu kubasebenzi abarhola imivuzo ephantsi iyacetywa
Urhulumente we ANC uceba ukuphakamisa irhafu engaphezulu phakathi
kwepesenti ezilishumi elinesibini nelinesihlanu 12%-15% kubasebenzi bonke. Oku mhlawumbi kuzakuya kumhlalaphantsi wabasebenzi. Xa umsebenzi eyeka ukusebenza, awuzukukwazi ukubanga neyiphina eyalemali, kumele ulinde de ufikelele kwiminyaka yomhlalaphantsi. Umgangatho wokudla ubom ungaphantsi kweminyaka engamashumi amahlanu yaye abathathu kwabalishumi abasebenzi bazakufa phambi kokuba bafikelele kwiminyaka engamashumi amane (40). Oku kuthetha ukuthi imali etsalelwa ‘umhlalaphantsi’ izakuya kwimizi egcina-imali nokuthi uninzi lwabasebenzi aluzukuyibona kwa ukuyibona le mali. Kodwa into ezakwenzeka kukuba umvuzo oya nawo ekhaya uzakunciphiswa ngepesenti ezilishumi elinesibini (12%). Umzekelo, ukuba umvuzo wakho ngamawaka amabini anamakhulu amahlanu erandi (R2500) ngenyanga, umvuzo oyanawo ekhaya uzakuba nganeno ngamakhulu amathathu erandi (R300)
Unciphiso lomhlalaphantsi noncedo oluvunyiweyo (igranti)
Umhlalaphantsi nemali yoncedo evunyiweyo inyuswe ngepesenti ezintlanu (5%) okanye ngaphantsi. Oku kuthetha ukuthi ngokwenyani urhulumente unciphise umhlalaphantsi negranti, ukuthi ngalomgangatho mtsha wewaka elineshumi lerandi (R1010) namakhulu amabini anamashumi amane erandi (R240) wabomhlalaphantsi nabegranti bazakuthenga ngaphantsi kunokuba bebethenga kunyaka ophelileyo. Kodwa, inkokheli zikaCosatu kunye nayo yonke imibutho esepalamente iludumisile oluhlahlo lwabiwo-mali njengoluxhasa abasebenzi. Imali yomhlalaphantsi inciphisiwe, ekubeni kwangaxesha linye urhulumente ebheyila inkampani ezingodla bodwa zemigodi ngezigidi ezibini zamawaka erandi (R2 Billion) kunye nabaqashi boshishino lwemoto ngamakhulu-khulu ezigidi zerandi. Amakhulu amathathu aneshumi lamawaka (310 000) agxothwa emisebenzini ngoku ngodla bodwa, awabheyilwa wona kwaphela.
Imfundo inikelwe kubantu babucala yaye uninzi lwabaphuma ezikolweni abakwazi kufunda okanye ukubhala. Ukongeza ulutsha olumalunga nezigidi ezine (4 million) phakathi kweminyaka esixhenxe namashumi amabini anesine (7-24) awayi nakwelinye iziko lezemfuno.
Ukusukela ngo 1994 kude kube ngoku inani leebhedi zesibhedlela ngabantu abaliwaka lehle ukusuka kumashumi amabini anesixhenxe ukuya kwishumi elinesixhenxe (27 to 17). Isibini esithathwini sesabelo senkcitho kwezempilo siya kwicandelo labucala. Iimanyano zabasebenzi zikaCosatu zizalisa ngemali kwezempilo zabucala.
Ukungakhathalelwa ukuqhubekayo kweelali
Uhlahlo lwabiwo-mali lwabele isigidi esingaphezu kwesiqingatha samawaka erandi (R1,8 Billion) ‘kwinkqubela phambili yelali’ ekubeni ikhulu elinamashumi asixhenxe anesithoba amawaka ezigidi zerandi (R179 Billion) lisabelwa ‘iinkonzo zezoqoqosho’. Urhulumente uchitha ngaphezulu ekucupheni kwinkcaso yongxowankulu abakhulu (uhlahlo lwabiwo-mali lwecandelo lohlakanipho zizigidi ezithathu zamawaka erandi R3 Billion) kuna kwizigidi ngezigidi ezihlala ezilalini. ‘Ukubheyilwa’ kongxowankulu abadla bodwa kukhutshelwe amakhulu khulu amawaka ezigidi (izitediyam zika 2010, uEskom, njalo njalo) ekubeni amahlwempu ezilalini eshiywa ukuba afe yindlala nokungabinamisebenzi. Ngokucacileyo, phantsi korhulumente wembumba kawonkewonke yomfela ndawonye weANC-SACP-Cosatu, amahlwempu ezilalini ajongene kuphela nokufa yindlala ngakumbi yaye nokufa phambi kwexesha.
Yonke imibutho esepalamente yeyongxowankulu
Amaxabiso engqolowa, ombona nawembewu kajongilanga kwihlabathi ehle ngaphezu kwepesenti ezingamashumi amane (40%) kwezinyanga zakutsha nje, kodwa ivenkile ezinkulu nabavelisi bokutya abawathobanga amaxabiso okutya ngangalomgangatho. Namnye umbutho osepalamente othe waqhuba iphulo lokuba amaxabiso okutya athotywe. Akukho namnye kuyo ophikise ubumenemene buka Eskom; akukho namnye kuyo obange ukuba ixabiso lokutya malithotywe, emva kokuba uTiger Brands nabanye abavelisi befunyaniswe benetyala leyelenqe lokunyusa amaxabiso esonka ukusukela ngo 1994. Inkokheli zikaCosatu akhange ziqhube iphulo olumiswe phantsi kolawulo oluyintloko ngokuchasene nendyikitya ekhoyo yokugxothwa emisebenzini, kodwa baludumisile uhlahlo lwabiwo-mali longxowankulu oluxhasa ukuxhamla iingeniso ngabaqeshi. Ngebebethe ikhwelo loqhankqalazo jikelele kumiswe ukugxothwa emisebenzini kodwa azenzanga nto ngoba zixakeke kakhulu ziququzelelela impumelelo yolonyulo yongxowankulu oyiANC. Umlo ochasene namaxabiso okutya aphezulu wanciphiswa wabaluqhankqalazo losuku olunye okokuba abasebenzi behle umsindo- akukho maxabiso athotyiweyo. Bekumele ukuba kubethwe ikhwelo lokwayo lwabasebenzi kuxhaswe inginginya eZimbabwe, Swaziland, DRC naseGaza, kodwa kuphela uqhankqalazo olunqaphazekayo nokumiswa kokusebenza kanye okuthe kwabanjwa.
Zombini i-DA, ANC neSACP zinoluvo olufanayo ngePalestina, zibeth’ ikhwelo lozimele geqe ababini borhulumente wabemi basePalestina. Akukho namnye umbutho epalamente okwazileyo ukubeth’ ikhwelo lesigqibo sepalamente ibeth’ ikhwelo lokwayo oluchasene noSirayeli. Iinkokheli zikaCosatu zixhasa iphulo lokwala ukusebenzisana nokwayo kuphela ukuba nje likhokelelela kuzimele geqe ababini borhulumente kubemi basePalestina.
Sibhentsisa icebo leDA lokubulala abasebenzi ngendlala
I-DA ibanga ukuba ine ‘cebo’ lokusombulula ukungabinamisebenzi. Ngokoku iphakamisa ukumiswa kwe Export Processing Zones (EPZ’s).
I-ILO yobumbo ngokutsha yenze uphononongo lweminyaka angamashumi amabini ngeEPZ’s yaye yagqiba ukuba ezi zindawo zemivuzo ephantsi noxhaphazo olukhulu. Namhlanje kukho ngaphezu kwezigidi ezingamashumi amabini anesixhenxe (27 million) zabasebenzi kwiEPZ’s ezingamakhulu asibhozo anamashumi amahlanu (850) kwindawo zonke, amashumi asithoba epesenti (90%) ababasebenzi ngabafazi. Ezi zindawo apho kukho ukugxothwa kwenginginya rhoqo, ukusetyenziswa kwabantwana, akukho mvuzo umisiweyo, apho onogada nomkhosi usetyenziswayo ukubetha kwa ilungelo lokuba lilungu lemanyano zabasebenzi. Iinkokheli zabasebenzi zabulawa, njengaseBangladesh; kaninzi amapolisa asebenzisa ubundlobongela ukutyumza imanyano yabasebenzi; akukho zimeko zimisiweyo ezinjegelungelo lwentlawulo yokusebenza ngaphaya kwexesha kunye nomda kwintsuku zokusebenza; eThailand, kudala yakhuthazwa njenge Asian Tiger, abantwana basebenzela isenti ezingamashumi asithoba (90 cents) ngeyure- le yinto i-DA eyifunayo ukunciphisa abasebenzi babekubukhoboka obupheleleyo.
Abona ngxowankulu babi abanjengo Coca cola, uNike ngabenzi bobubi abaqhubekekayo bokuhlukumeza amalungelo oluntu kwiEPZ’s; ukuba ongxowankulu abakholwa zimeko, ukuba umzekelo urhulumente ufuna ukubacinezela kwindlela abasebenza ngayo, basuke bahambe; oku kwenzekile eMalaysia apho iminyaka embalwa edlulileyo xa abasebenzi babefuna amalungelo angamanye, ipesenti ezingamashumi amathandathu (60%) zabaqashi beeEPZ bemka ngobusuku. Okungokunye, iiEPZ sifana nelinye ilizwe- elingachaphazelwa nanguwuphi umthetho wendawo (okanye nawuphina umthetho ukusuk’ apho); ongxowankulu apho abahlawuli rhafu kwaphela.
I-DA ibonakalisa elona cala libi lezingxaki zangoku zongxowankulu: ongxowankulu benze inkitha yeengeniso iminyaka emininzi, kuba ngoku iingeniso zabo zisehla kancinane, bafuna ukuba sibabheyile. Bafuna ukutyhalela umthwalo wengxaki zabo kubasebenzi ngokuxutha amalungelo angephi esinawo. Bafuna ukunciphisa imivuzo yaye batshabalalise imanyano zabasebenzi. Nyaka nonyaka iinkampani zongxowankulu eMzantsi Afrika zibuyisela elizweni lazo ngaphezu kwamakhulu amabini amawaka ezigidi zerandi (R200 billion) iingeniso kwinqununu zabo kumbindi wama impiriyali. Iminyaka ekubeni izinga lerhafu lalinciphisiwe ukusuka kwipesenti ezingamashumi amathathu anesihlanu ukuya kumashumi amabini anesibhozo (35% to 28%), ongxowankulu baqhubeka begxotha inkitha yabasebenzi. Abaphumelelanga ukuzisa amathuba emisebenzi yaye into i-DA ebafunela yona kukubanciphisela ngakumbi izinga lerhafu yenkampani. Le yindlela engcolileyo yokunyusa iingeniso njengokuba ongxowankulu bezakusuka baqhubeke ngokugxotha abantu emisebenzini. I-DA ithi ‘siluhlanga olunye’ xa ifuna ivoti zethu, kodwa xa kusiyiwa ekwahlulelaneni ngeengeniso zenkampani, bakholelwa kwimarike yabasebenzi ezintlu ezimbini. Hayi ngokubheyila oongxowankulu- gxotha abaqashi!
Sibhentsisa ukuzama kweCOPE ukwahlula abasebenzi
IWorkers International Vanguard League iyayigweba imizamo yeCOPE (Congress of the People) yokwahlula impembelelo yabasebenzi ngokufuna ukwakha imanyano yabasebenzi entsha yaye/ okanye umanyano lwabasebenzi. Ngokushiywa lixesha eliqela liqhekekileyo labamnyama abakumgangatho ophakathi lifumanisile ukuba alinasiseko phakathi kwabasebenzi. Njengokuba iyintsobi yabakumgangatho ophakathi bafuna ukusebenzisa abasebenzi babalwele amadabi abo; bafuna ukusebenzisa abasebenzi kwiivoti kulonyulo lukaApril.
Upapasho-nkqubo lwabo luxhomekeke ‘kuzinzo lwezoqoqosho kuzwelonke’ elizwe `eliluxhamlileyo’(ukuyitolika: baxhasa inkqubo yezoqoqosho u-GEAR engunobangela wokuvuleleka kwabasebenzi kuxhaphazo olukhulu, ekubandezelekeni okukhulu nasekubulaweni yindlala); bakholelwa isitshixo, ‘yinkqubela phambili kwezoshishino’ (ukuyitolika: ukongeza ongxowankulu abamnyama baxhamle ekuxhatshazweni kwabasebenzi); bakholelwa ekwenzeni izigqibo ngokubambisana nosomashishini abakhulu kuko konke urhulumente akwenzayo. Masikubeke kucace: ongxowankulu abakhulu bagxotha amakhulu amathathu aneshumi lamawaka abasebenzi 310 000, basibulale ngendlala ngabom ngamaxabiso aphezulu yaye basigcina singenamakhaya ngokwenza iingeniso ezinkulu ezindlwini. Ikwangabangxowankulu bakhulu banye i-COPE efuna ukwenza izigqibo ngokubambisana malunga norhulumente. Ngamanye amagama, inkqubo kaCOPE kukuba ngamakhwenkwe abaqashi abatsha bama impiriyali eMzantsi Afrika, bafuna ukuba yiMDC yaseMzantsi Afrika. Ngenkqubo yongxowankulu, luhlobo luni lwemanyano yabasebenzi abazungulichele banoyakha? Ngongxowankulu abadla bodwa kuphela abazakuzuza ekwenzeni abasebenzi bohlulwa-hlulwe ngakumbi.
Ngoku lixesha sifuna umanyano lwabasebenzi ngokuchasene namaxabiso aphezulu, ngokuchasene nokugxothwa emisebenzini, ngokuchasene nemfazwe exhaswa ngama impiriyali e-DRC, eGaza, ngokuchaseneyo nokuphangwa kweZimbabwe ngama impiriyali. Ukuba inkokheli zemanyano zabasebenzi azibhekise phambili ubunkokheli babasebenzi, masihlanganise sibatshintshe; kodwa oku makube phantsi kwenkqubo ecacileyo yabasebenzi, yaye phantsi kwesiseko somanyano lwabasebenzi.
Sibeth’ ikhwelo kubasebenzi bayilahle i-COPE kunye ‘nemanyano yayo yabasebenzi’ enguzungulichele.
Nyusa irhafu yenkampani ibe zipesenti ezingamashumi amahlanu (50%) ngoku! Oku kuzakunika isiseko sokwakha izindlu kumntu wonke ngokukhawulezileyo kunye nezinye imfuno zokuhlala;
Qhawula umfela ndawonye we ANC neSACP; Thatha abalwi babasebenzi endaweni yeenkokheli zikaCosatu abo bazakubhekisa phambili imfuno zabasebenzi yaye bazondelele ukuzimela kokwenyani kwabasebenzi;
hlutha yonke imizi egcina imali, yibeke phantsi kolawulo lwabasebenzi yaye mayibekwe phantsi kolawulo oluyintloko olunye;
I-revolution yoMzantsi Afrika yinxalenye ye Socialist revolution yehlabathi: Uqoqosho loMzantsi Afrika nongxowankulu abalawulayo luqhakamshelene ngamawaka emisonto kwezoqoqosho lwehlabathi nama impiriyali. Ukwanda kakhulu kokusebenza ngokwahlukeneyo ngexesha lama impiriyali kuyikhupha ngaphandle nayiphina ingcinga yempumelelo ye revolution kwilizwe elinye. Impumelelo ye revolution yoMzantsi Afrika izakuxhomekeka ngokupheleleyo ekuphumelelweni kwe revolutions kwe linye ilizwe okanye ngaphezulu eliqhubele phambili lama impiriyali-longxowankulu yaye nakwinkxaso yenene yabasebenzi behlabathi. Eyona ntsebenziswano iphezulu kwi revolution yoMzantsi Afrika iyakuba yi socialist revolution eyimpumelelo kwe linye okanye ngaphezulu ikomkhulu lama impiriyali.
Imisebenzi kumntu wonke: nciphisa iveki yokusebenza, ngaphandle kokwehla kwemivuzo ibe ziyure ezingamashumi amathathu anesihlanu (35 iyure), yabelana ngomsebenzi phakathi kwabo bonke abo bangasebenza ; abo bakushishino lwemigodi nakoluyingozi ibe ngamashumi amathathu eyure ngeveki (30 iyure) ngaphandle kokwehla kwemivuzo; wonke umsebenzi kufanele wahlulwahlulwe phakathi kwabo bonke abo bakwaziyo ukusebenza. Kum ba wokugxothwa emisebenzini inkampani echaphazelekayo kufuneka ihluthwe yaye ibekwe phantsi kolawulo lwabasebenzi [naphina apho sithetha ngokuhluthwa kule nkqubo, sithetha ukuhluthwa ngaphandle kwentlawulo];
Ukunyuswa kwemivuzo xa amaxabiso enyuka nokulawula kwamaxabiso: Okwangoku, ukuxhuma okukhulukazi kwamaxabiso okutya nawamandla kwenza umonakalokazi ofikelela kwiqondo lobungqangagqwili ebomini babasebenzi abasebenzayo nabangasebenziyo nakwintsapho zabo. Unxulubelwano lwabasebenzi nongxowankulu belusoloko luphawulwa ngemivuzo yendlala, amaxabiso aphezulu kunye neengeniso ezigqithileyo. Sibanga ukuba imivuzo kufuneka inyuke naninina xa kukho amaxabiso anyukayo (sliding scale of wages). Hayi, kwizivumelwano zonyaka okanye zeminyaka emininzi. Kufuneka kubekho ukusekwa kweekomiti zabasebenzi zijonge amaxabiso aphezulu kuzozonke indawo zokusebenza nakuzozonke ingingqi. Nciphisa amaxabiso okutya ngeepesenti ezingamashumi amahlanu (50%); hlutha ngaphandle kwentlawulo yaye ubeke phantsi kolawulo lwabasebenzi zonke ivenkile ezinkulu zokutya nezemveliso;
Izindlu ezifanelekileyo kumntu wonke: Unikezelo lwezindlu lunikezwe kubantu babucala yaye lashiywa ezandleni zemizi egcina imali. Inkxaso karhulumente ixhasa izindlu zentengiso njengokuba inganelanga kwaphela kwimfuno zezindlu eziyimfuneko zabasebenzi. Ukuzuzwa kweengeniso ngabakhi yaye uMthetho wokufumana ityala ukhetha ubukhulu besininzi sabasebenzi kwizindlu ezifanelekileyo. Phantsi kwezimeko inyambalala yokungabinazindlu ayizukuba yinto esisigxina kuphela yoMzantsi Afrika ongungxowankulu kodwa izakuqhubekeka ngokunyuka nyaka nonyaka. Sibanga unikezelo kamsinya lwezindlu ezifanelekileyo, zerenti ephantsi kumntu wonke (kwabendodla, abangaphangeliyo nabasebenzi abarhola imivuzo ephantsi kakhulu baxolelwe ekuhlawuleni irenti). Sibanga ukuba zonke izakhiwo ezingahlalwayo, iiofisi, iihotele zihluthwe yaye zenziwe zibekelwe imfuno zezindlu; sibanga ukuba amagumbi eeofisi angenabantu ongxowankulu abakhulu, inkampani zeinshurensi, amagqwetha, ababhali-zimali ahluthwe yaye abekelwe imfuno zezindlu; izindlu ezinkulu nemihlaba ekwakhiwe kuyo izindlu zongxowankulu nabakumgangatho ophakathi ophezulu mayihluthwe yaye ibekelwe izindlu; kupheliswe ukwahlulahlulwa kokuhlala ngokobuhlanga yaye kunikwe kwakhona indawo yokuhlala abasebenzi kufutshane nendawo zokusebenza nasezidolophini; abasebenzi basezilalini kufuneka banikwe ukhuseleko lokuba nemihlaba isigxina, ukwakhiwa ngokutsha kwendawo zabo zokuhlala kamsinya nokuhluthwa kwezakhiwo zongxowankulu abangabanini bemihlaba yaye kunikwe kwakho indawo yokuhlala abasebenzi basezilalini kwizindlu ezifanelekileyo.
Hlutha odla bodwa abangabanini bemihlaba: Iipesenti ezingamashumi asithoba (90%) omhlaba wokulima ngowongxowankulu boshishino abadla bodwa; umsebenzi wakamsinya kukuhlutha (ngaphandle kokuhlawulwa) wonke lomhlaba yaye kusekwe ulawulo lwabasebenzi; kubekwe phantsi kolawulo lukarhulumente imihlaba eyayisakuba phantsi koZimele-geqe yaye kubuyiselwe lomihlaba kwabo bafuna ukuqhubekeka nokuziphilela, kunye nenkxaso karhulumente ngokunikezela ngakumbi ngemihlaba, izixhobo, ityala nembewu, ngenjongo zokukhuthaza lawo mafama aseke umanyano lwamashishini yaye ekugqibeleni ubunini babo bonke obuzakubandakanywa ebufameni bobusoshali bobunini babo bonke.
IPalestina emanyeneyo: ikhwelo lengxoxo kukwayo oluchasene noSirayeli nokuphakamisa ngokukhawuleza ukwayo lwabasebenzi oluchasene noSirayeli, Zimbabwe neSwaziland; phambili kwiPalestina emanyeneyo; phambili kulawulo lwabasebenzi ePalestina, Zimbabwe, DRC, Swaziland;
Imfundo yasimahla ekhululayo, enyanzelekileyo jikelele: Lenkqubo ikhoyo yezemfundo yindlela yokugcina ukongamela komgangatho wongxowankulu. Ibeka imiqobo endleleni yabasebenzi xa bebonke ekufumaneni ulwazi lobunzululwazi. Iiyunivesiti nenjingalwazi zazo okwangoku zidlala indima, ngokubanzi, yokunika isizathu senkqubo yokuxhaphaza kobungxowankulu. Ibango lokuqala kwezemfundo lelokuba inkqubo yezemfundo mayibe liqonga lokubhangisa ngokupheleleyo ukwahlukahlukana kokuhlala ngokwemigangatho; imele ibeliqonga lokuhlaziya intlalo yobukomanisi. Umzabalazo wolu tshintsho lubalulekileyo lwesiseko semfundo luhamba kunye nomzabalazo wemfundo yasimahla, yesinyanzelo, yoqeqesho jikelele neyobugcisa ukusukela kwindawo yokulondoloza abantwana, kwisikolo sabantwana abancinane abangekabi naminyaka mithandathu, kwisikolo sokungenela, kwesokuqala ukuya kwesodidi lwesibini. Ukukhululwa komama yaye ukugxininisa okukodwa kokuba imfundo yabantwana ngumthwalo wentlalo. Bonke abantwana kufuneka babenokutya, impahla, izihlangu nezixhobo zesikolo zabo zinikezwe simahla ngurhulumente. Inkxaso kubafundi, ingakumbi abafundi babasebenzi ukwenza babenako ukuhamba iiyunivesiti; uncedo oluninzi oluvela kurhulumente kubasebenzi, kubalimi nakwabasaqalayo (abafana nababakhoyo): amaziko emfundo ephambili, amathala encwadi, imfundo yabadala, iiyunivesiti ezivulekileyo, uludwe lwezifundo, iimfundiso, imiboniso bhanyabhanya, njalo njalo. Uqeqesho olubanzi lobunzululwazi nobugcisa, nolusisigxina lwabo bonke abafundi abangaphezulu kweminyaka yokuzalwa elishumi elinesixhenxe.
Ukubhangiswa kwemimmandla eyahlukanisiweyo: Uqhakamshelwano lwemizi egcina imali yaye unikezelo lwezindlu luthetha ukuthi phantsi kolawulo longxowankulu imimmandla eyahlukanisiweyo yamaqela izakuhlala. Le yinyani ekhoyo yaye esekela negcina yobuhlanga. Kunye namabango amanye ezindlwini njengokuba kubonisiwe kwibango lesine ngasentla, elibango lenzelwe izikolo izinto zokuhlala ezenza ukuphila kubemnandi iinkonzo zinikezelwe ngokufanayo.
Ukhathalelo lwezempilo lwasimahla jikelele: Ngaphezulu kwepesenti ezingamashumi asixhenxe yenkcitho yelizwe kwezempilo iya kumasebe abucala. Kuphela ngabantu abasixhenxe kwabazizigidi ezingamashumi amane anesihlanu (7 of 45 million) abafumana uncedo koku. Isininzi sabantu (izigidi ezingamashumi amathathu anesibhozo 38 million) zijongene nenkqubo yezempilo edilikayo eyenza iingeniso ngokubalulekileyo kunempilo. Sibanga ukuba zonke izibhedlele zangasese nekliniki zihluthwe yaye uncedo lwezempilo lasimahla lunikwe umntu wonke. Kukho imfuneko ekhawulezileyo yoqeqesho lwesizukulwana esitsha sabasebenzi bezempilo abayiqondayo intlalo.
Ukuphelisa ukuthengisa izinto zikarhulumente kubantu babucala: Kwelixesha likhoyo lokubola kobungxowankulu, ongxowankulu abazuza ngeengxaki zabantu ngethemba lokugqibela, bakhangela amadlelo amatsha okuwaxhaphaza njengokuba betsala nzima ukoyisa iingeniso eziwayo. Umbane, umhlaba ophantsi korhulumente, imfundo, amanzi, ezempilo, ezentlalakahle, njalo njalo zonke zibangamaxhoba ongxowankulu. Sibanga ukuhluthwa kwazo zonke izinto zangasese zikarhulumente (ngaphandle kokuhlawulwa) nokuba zibekwe phantsi kolawulo lwabasebenzi.
Ukupheliswa kokukhanywa kwezoqoqosho ngama impiriyali: Yonke imizi egcina imali, iinkampani ezinkulu zokutya, imigodi emikhulu, inyani ngaphezulu kwepesenti ezingamashumi asibhozo (80%) zeJSE (Johannesburg Stock Exchange) zilawulwa yimizi egcina imali yama impiriyali nodla bodwa. Ezinkampani zama impiriyali ngako oko zizisizathu sokuqala sokungaphangeli kwenyambalala yabantu, imivuzo ephantsi, amaxabiso aphezulu, ukungabinamakhaya kwenyambalala yabantu, ukudilika koncedo lwezempilo obeluluncinci kakade, ukuxhatshazwa okugqithileyo kwabasebenzi emisebenzini nengcinezelo yabalimi belizwe kwi Afrika iphela. Ama impiriyali enze iingeniso ezininzi kakhulu ngexesha lolawulo lweNational Party, emva kobungonyama obukhulukazi boxhaphazo nobukhoboka kwisininzi sabasebenzi. Kuphela xa ulawulo lwama impiriyali lalusongelwe yi revolution ngeminyaka yo 1980 athi ayamkela inguqulelo enciphiseleke, kulawulo lwentando yesininzi lobungxowankulu. Ngoku ayaqhubekeka ngokuzuza iingeniso ngokwezinga elikhulukazi kunezakhe azizuza ngaphambili. Sibanga ukuhluthwa kwakamsinyane kwazo zonke izinto ama impiriyali anazo nokuba zibekwe phantsi kolawulo lwabasebenzi.
Ukupheliswa kokuthanda ubuzwe nokwahlula ilizwe ngokwemimmandla: Kangangeminyaka engamakhulu-khulu ongxowankulu bebexhomekeke kubuchule boku ‘bahlule uzobalawula’. Obunye bobobuchule kukukhuthaza iyantlukwano ngokobuzwe. Isiphelo esiqulathe konke, ngokungakhathaleli iintwana zamalungelo awodwa kwiqela elinye nelinye, bubuhlwempu obuqhubekekayo kwinyambalala yabantu. Sibanga ukupheliswa kwamabhunga obuhlanga nokuwatshintsha ngamabhunga abasebenzi, apho inkokheli ezonyuliweyo, ziphantsi kokurhoxiswa kwangoko yaye ezifumana umvuzo womndilili womsebenzi onobuchule. Ngokwenyani onke amaziko onyuliweyo kufanele abe kwesisiseko sinye. Onke amaphondo kufuneka apheliswe (angumfuziselo wekhondo elifanayo nelisakuba ngoZimelegeqe) yaye inkqubo entsha yokuceba okusembindini iphakanyiswe ukwenzela ukwahlukana phakathi kwedolophu neelali kubhangiswe.
Kude lee ngoloyiko olungenasizathu sivakalayo lokudibana nabantu basemzini (xenophobia): Inkqubela phambili yezoqoqosho loMzantsi Afrika ibisoloko ixhomekeke emandleni abasebenzi abasuka kulo lonke ihlabathi. Abasebenzi abasuka eMalaysia, eChina, eIndia, eMazantsi eAfrika, eEurope, njalo njalo ngamanye amaxesha badlala indima ekwakheni ezoqoqosho. Kwakhona, abosasazo lwendaba namaziko ongxowankulu aphembelela ngokwenza, ukungavani ngokobuzwe esenzela ukwahlula abasebenzi, ngenjongo ezinye zokugcina ulawulo, ukuthi zokuqinisekisa ukuqhubeka koxhaphazo lwenyambalala yonke yabantu. Kukho kuphela iintsapho zoongxowankulu ezingamakhulu amane (400) ezilawula isambuku sobutyebi behlabathi. Lama impiriyali manye asemva kweemfazwe eAfrika naseMzantsi Melika, kuMbindi-Mpuma, lawo asemva koxhaphazo lwabasebenzi kumazwe onke, kananjalo anobutyala bokuxhaphaza abasebenzi eMzantsi Afrika. Kuninzi esinako okufanayo nabasebenzi abasebenza kude nekhaya ngaphezulu kunongxowankulu balapha. Siyayala lengcinga ’yabasebenzi abasebenza kude nekhaya ngokungekho mthethweni’. Simela umanyano lwabasebenzi behlabathi emzabalazweni ochasene notshaba lwethu olunye- ama impiriyali-ongxowankulu behlabathi. Abasebenzi abanakhaya yaye ngenene abanalizwe. Umzabalazo wethu weSocialism unganeno kumzabalazo weSocialism yehlabathi. Kulo mzabalazo sime siyimbumba yamanyama kunye nabasebenzi bonke behlabathi.
Amalungelo alinganayo komama: Ukusombulula umbuzo weSini sikholelwa ukuba obewuthathwa ngokwesithethe njengo ‘msebenzi womama’ kufuneka kohlulelwane ngawo: Ngoko ke sibanga indawo zokuhlamba ku ayinwe impahla zoluntu ezitshiphu; indawo zokutyela zoluntu/izindlu zokutyela ezitshiphu; ukukhathalelwa kwabantwana nemfundo kufuneka ibengumthwalo kabani ngamnye. Omongikazi abangomama kufanele babenendawo zokulondoloza abantwana kwindawo zabo zokusebenza. Imisebenzi ethambileyo kufuneka imiselwe phambi nasemva kokubeleka ngokwexesha elifanelekileyo. Ukucoca indlu kufuneka ibengumthwalo wabo bonke.
Umanyano lwamazwe obuSoshali eAfrika eseMazantsi:Ngenxa yoqhakamshelwano lommandla weAfrika eseMazantsi simela ukumiswa komanyano lamazwe obuSoshali eAfrika eseMazantsi njengenguqulelo esondela kuManyano lwamazwe obuSoshali baMabhunga kwiAfrika eseMazantsi. Kwangaxesha linye simela ukumiswa koManyano lamazwe obuSoshali aseAfrika. Imeko ebanzi kanti, mele lonke ixesha ibe kukubhekiswa phambili kwe revolution yobuSoshali behlabathi, leyo ingazukuqhuba ngomgca othe tse kodwa ezakuvula ezinye indibaniso ezinokwenzeka ezingenakumiswa ngenx’ engaphambili. Kwangexesha elinye kuyafuneka ukuqonda ukuba naluphina utshintsho olululo lonxibelelwano lobungxowankulu eAfrika, okanye naphina kwihlabathi lamazwe engcinezelo yezimini, alunakugcinwa ngaphandle kwe revolution yobuSoshali kwe linye ikomkhulu lama impiriyali okanye ngaphezulu.
Ekwakhiweni kweekomiti zabasebenzi zokhuselo: Ongxowankulu nee agents zabo benza uhlaselo olungapheliyo oluchasene nabasebenzi, ngamaxabiso aphezulu, ngokugxotha inyambalala emisebenzini. Ubungqangangqwili bongxowankulu beengeniso ezingaphaya buyanda. Oku kuthetha ukuba uhlaselo kubasebenzi luzakuba ngakumbi yaye njengakwisihlo saseBolivia, kungathetha okunokwenzeka abasebenzi bajongane namaqela ohlaselo ngokungenalusini karhulumente. Kuyafuneka abasebenzi balungiselelwe kwindawo esisebenza kuzo nakwindawo esihlala kuzo ngokumisa iikomiti zokhuselo zabasebenzi abakudidi oluphantshi. Ezikomiti zingaba sisihluma samabhunga abasebenzi abonakalisa ulawulo lwentando yesininzi lwabasebenzi ngaphandle epalamente, yaye zizakuba sisiseko sokwakha imizabalazo namaphulo endaweni, kwimimmandla, kuzwe lonke yaye kwihlabathi.
Elawulweni ngokozwilakhe lwabasebenzi: Utshintsho luzakuza ngaphandle kwe yaye ngokuchaseneyo nepalamente: Okubalulekileyo, esikumeleyo lutshintsho olupheleleyo lonxibelelwano lwentlalo yezopolitiko-noqoqosho- ukuthi ukumiswa kolawulo lwabasebenzi. Utshintsho lweSocialism lungabakho kuphela ngolawulo ngokozwi lakhe labasebenzi (ulawulo ngokozwi lakhe lesininzi), abalungiselelwe kwi soviets (amabhunga abasebenzi), ngabathunywa abaxhomekeke ekurhoxisweni ngoko nangoko, abarhola umvuzo wabasebenzi bonke abanobuchule, ukupheliswa komkhosi ohlel’ ukho yaye ulawulo lwabasebenzi abaxhobileyo; ngokuchaseneyo ‘nolawulo lwentando yesininzi’ lwepalamente yongxowankulu (ngokwenyani ulawulo ngokozwi lakhe legcuntswana longxowankulu) sicebisa amabhunga abasebenzi lawo azakuwisa umthetho yaye abe ngamasebe ombuso alawulayo kwangaxesha linye.
Likhutshwe ngomhla 21.02.09 yiWorkers International Vanguard League, 1st Floor, Community House, 41 Salt River rd, Salt River, 7925 ph 0214476777 email workersinternational@gmail.com website www.workersinternational.org.za Gauteng: ph 0781297797; Free State ph 0761866147; Eastern Cape ph 0734751732; Western Cape: ph 0822020617; Mpumalanga ph 0766462481;
Kzn: ph 0763657361